Jwxo-shiil, oo Wadahadal Odayaal ka Dib, Addis Ababa Ergo Beeleed u Dirsaday – Rasaasa News
May 6, 2010 Itobiya Ergo Beeleed u Dirsaday., Jwxo-shiil, oo Wadahadal Odayaal ka Dib
Minneapolis – Wararka naga soo gaadhaya dalka Maraykanka, gaar ahaana dawlad gabaleedka Minnesota [minnesota state] ayaa sheegaya, in ergo uu hogaaminayo Janaral Cabdiraxman Khalif Dhicis ay labadan maalmood ee fooda inagu soo haya u ambabixidoonaan dhinaca Addis Ababa.
Jenaral Cabdiraxman Khaliif, ayaa samayndoon iskudaygii 2aad iyo heshiis lala galo dawlada Itobiya oo xiligan dhexmartay Jwxo-shiil iyo Itobiya. Cabdiraxmaan ayaa mar hore intii uu wada socday ururka ONLF, iskiis asagu isugu xil saaray in uu dhexdhexaadiyo Itobiya iyo ONLF, xiligaas oo uu iskudaygu uu ka socon waayey dhinaca Itobiya. Iskudaygaas ayaa Cabdiraxmaan u keentay in uu ku noqon kari waayo Itobiya, xiligaas oo ku beegnayd 2003/4, intaa wixii ka dambeeyeyna waxaa uu hoy ka dhigtay Minneapolis.
Sida ay wararku sheegayaan Janaral, Cabdiraxman Khaliif, ayaa socdaalkiisa waxaa uu ka dambeeyay ergo uu Jwxo-shiil, u dirsaday raga odayaal ah, isaga oo u sheegay in ay dhibaato wayn haysato uuna ku fashilmay halgankii ay ummadu lahayd dambiyo beeleedna ku galay. Wuxuu sheegay in uu marar badan isku dayey in heshiis uu ka helo Itobiya balse ay ku gacan saydhay.
Waftiga oo ahaa dad dhawra oo isku beel ah oo uu ka mid ahaa Xuseen Mataan, ujeedaduna ahayd in ay yidhaahdaan anaga ayaa ONLF wadnay, waxaanan rabnaa in aan isa soo dhiibno. Arinka ergada ee ah in dhawr la isku raaco waxaa diiday Cabdiraxmaan Khaliif, isaga oo yidhi awal baa isha nalgu hayeye ee hana ceebaynina, kaligay ayaa bixi. Tigidhada dhawrka qof ee la rabay in ay Maraykanka ka baxaan, waxaa bixiyey Jwxo-shiil, oo ka bixiyey xoogaa qaaraan ah oo uu hayey duq London degan oo la yidhaahdo Deeq-Ilow.
Jwxo-shiil, ayey dawlada Itobiya xukun dil ah ku riday isaga oo maqan, waxaana lagu eedeeyey in uu ku dilay tuulada Cobale 74 ruux, sanadkii 2007. Waxayna meela badan ka sheegtay Itobiya in Jwxo-shiil, uusan ahayn muwaadin Itobiyan ah ee uu yahay Janan Somalia, dambina ka galay dalka Itobiya.
Waxaad moodaa in ururadii Mucaaradka ay u kala tartamayaan heshiis lala galo Itobiya, iyaga oo kala gooni gooni ah, kolkii ay ku heshiin waayeen halgankii ay ummadu lahayd, taas oo aan is leeyahay waxaa Aabe ugu ah Jwxo-shiil.
Ururada Mucaaradka ah ee la dagaalamayay Itobiya, ayaa waxaa aas aaskooda iyo jihayntooda siyaasadeedba lug wayn ku lahaa Dr. M S Dolal, oo kal hore ay ku dishay kooxda Jwxo-shiil, gudaha Ogadeeniya, waana arinta keentay maanta in uu soo xidhmo halgankii ay ku jirtay ummada Somalida Ogadeeniya.